Health Archives - Myanmar Red News
နှာပုပ် ၊ နှာရည်ယို၊ ထိပ်ကပ်နာအတွက် လက်တွေ့ဆေးနည်း
နှာပုပ် ၊ နှာရည်ယို၊ ထိပ်ကပ်နာအတွက် လက်တွေ့ဆေးနည်း ဒီဆေးနည်းကိုတော့ တစ်သက်လုံး မျိုးရိုး အစဉ်အဆက်အထိ့ မှတ်သားသွား လက်ဆင့်သာ ကမ်း သွားပါ။ ထိပ်ကပ်နာ (Sinusitis)နှာရည်ယိုခြင်း နှာရည်ပုတ်ခြင်းများ ကြုံတွေ့ခံစားနေရပါသလား…။ ဒီအတွက် စိတ်မညစ်နဲ့ မကြောက်နဲ့ လက်တွေ့ အမြစ်ပြတ် ပျောက်ကင်းစေရပါမယ်။ မုရိုးရွက်(calotropis procera)သို့မဟုတ် နို့ခဲရွက်ရဲ့အပင်က ထွက်ရှိတဲ့ အစေး(sap)ကို မိမိ၏ နှာခေါင်းအတွင်းသို့ ရှုရှိုက်သွင်းလိုက်ပါက.. များမကြာမှီ ရက်အနည်းငယ်အတွင်း လုံးဝ အရှင်း အမြစ်ပြတ် ပျောက်ကင်းစေပါမည်။ နောက်တစ်မျိုးက ကင်ပွန်းသီး(Soap nut)အခြောက်ကို ဆန်ဆေးရည်ဖြင့် ကျောက်ပြင်ပေါ်မှာ ပျစ်ပျစ် သွေး၍ ရရှိလာသည့် အနှစ်များကို မိမိ၏ နှာခေါင်းအတွင်းသို့ ရှုရှိုက်သွင်းယူလိုက်ပါက ရက်အနည်းငယ်မှာ သိသာစွာ ပျောက်ကင်းသက်သာစေပါမည်။ Unicode နှာပုပျ ၊ […]
လေဖြတ်၊ လေငန်း၊ အကြော ရောဂါများ အတွက် ဆေးနည်းကောင်း
လေဖြတ်၊ လေငန်း၊ အကြော ရောဂါများ အတွက် ဆေးနည်းကောင်း လေငန်း ရောဂါ – လေဖြတ်သည် ဟုလည်းသုံးနှူန်းသည်။ခန္ဓာကိုယ်၏တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ တစ်ခြမ်းဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ မလှုပ်ရှားနိုင်သောရောဂါဖြစ်သည်။ ဦးနှောက်တွင်သွေးခဲ ၍ ဖြစ်စေ၊ သွေးကြောပေါက်၍ဖြစ်စေ၊နောက်ဆက်တွဲဦးနှောက်သွေးထောက်ပံမှု မရခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ လေဖြတ် လေငန်းရောဂါဖြစ်ပွားရပါသည်။ လျှာပွတ်ဆေး – လေဖြတ်၍ ပါးရွဲ့စောင်းလျှင် နနွင်းမှုန့်ကိုမီးခဲပေါ်ဖြူး၍မှိုင်းရှူပေးပါ။လေဖြတ်၍ လျှာရွဲ့စောင်းလျှင် စပါးကြီးသည်းခြေဖြင့် လျှာကိုပွတ်ပေးလိုက်ပါ။ လျှာတိုပြီးအသံမထွက်လျှင် စပါးလင်အမြစ်ကိုကြိတ်၍ လျှာတွင်ပွတ်ပေးပါ။မေးအောက်တွင်လိမ်းပေးပါ။လေဖြတ်၍ စကားမပီသလျှင် ကွမ်းရွက်နှင့်ဆားကိုထုပ် မီးဖုတ်ပြီးသံပရာရည်နှင့်ဖျော် လျှာတွင်ပွတ်ပေးပါ။လေဖြတ်၍ စကားပြောအသံမထွက်လျှင် ဝံအူမြစ်ကိုသွေးပြီးလည်ပင်းတွင်လိမ်းပေးပါ။ ဆားနှင့်ရောပြီး လျှာအရင်းနှိုက်ကာပွတ်ပေးလျှင်အသံပြန်ထွက်သည်။ သံပရာသီးကိုအလုံးလိုက် ပြာချပြီး လျှာပွတ်ပေးလျှင် အသံပြန်ထွက်သည်။ကွမ်းရွက်အရည်နှင့် နှမ်းဆီရောပြီး ပါးကြောကိုဆွဲလှည့်ပေးပါ။ တစ်ကိုယ်လုံးလိမ်း ဆေး မိဿလင်ဥအခြောက်လှန်း၍ အမှုန့်ပြု အဝတ်ပါးဖြင့်ထုပ်ပြီးရေနွေးငွေ့ခံကာ လေ ဖြတ်သူ၏ မလှုပ်ရှားနိုင်သောကိုယ်အင်္ဂါများကို ကြပ်ထုပ်ထိုးပေးပါ။ […]
တကိုယ်လုံး နာကျင်ကိုက်ခဲနေသူများ အညောင်းမိလို့ ထိုင်းမှိုင်းနေသူများ အတွက် ကိုယ်တွေ့ဆေးနည်း
တကိုယ်လုံး နာကျင်ကိုက်ခဲနေသူများ အညောင်းမိလို့ ထိုင်းမှိုင်းနေသူများ အတွက် ကိုယ်တွေ့ဆေးနည်း လက်တွေ့ ဆေးစွမ်း ကောင်းလေး မျှဝေပေးပါရစေ..။အညောင်းမိလို့ ထိုင်းမှိုင်းနေသူများ တကိုယ်လုံး နာကျင် ကိုက်ခဲ နေသူများ…။ ရာသီ ပေါ် အညောင်းမိ တုတ်ကွေး ဖျားနာ ခံစားနေရသူများ…။ဤ ပုံပါ အပင်ကို အရွက် အမြစ်မကျန် ပြု တ်သောက်ခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်…။ အပင်နာမည်က. သံမနိုင်ကျောက်မနိုင်ပင်ခေါ် တောမြေပဲပင် ပါ။ ဒေသအလိုက် အခေါ်ဝေါ် ပြောင်းနိုင်ပါသည်…။ နောက်ထပ်.. ကျောက်ကွဲပင်လို့လဲ ခေါ်ပါသေးသည်…။ ဆီးကျောက်တည် နေသူများ သောက်ပေးပါက. ကျောက်ကွဲကြေစေပြီး. ပျောက်ကင်းနိုင်သည်ဟူ၏..။ မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ဖြစ်ပါသည်…။ ဘေးဘယာတွေ ဝေးကွာကြပါစေ…။ unicode တကိုယျလုံး နာကငျြကိုကျခဲနသေူမြား အညောငျးမိလို့ ထိုငျးမှိုငျးနသေူမြား အတှကျ ကိုယျတှဆေ့ေးနညျး […]
သွားကိုက်ဝေဒနာကို အမြန်ဆုံး သက်သာသွားစေမယ့် အိမ်တွင်း ဆေးနည်းလမ်းကောင်းများ
သွားကိုက်ဝေဒနာကို အမြန်ဆုံး သက်သာသွားစေမယ့် အိမ်တွင်း ဆေးနည်းလမ်းကောင်းများ အချိုအစားအစာတွေ အစားများတဲ့အခါ ၊အစားစားပြီးတိုင်း ပလုတ်မကျင်းတဲ့အခါ ၊အိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း သွားမတိုက်တဲ့အခါ သွားကြားထဲမှာ ကပ်ငြိနေတဲ့ စားကြွင်းစားကျန်တွေက သင့်သွားကို တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ကောင်းကောင်းကြီး ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ အလေ့အကျင့်ဆိုးတွေကြောင့် မခံမရပ်နိုင်အောင် သွားကိုက်လာပြီဆိုရင်တော့ သွားဆရာဝန်နဲ့ မဖြစ်မနေသွားပြရပါတော့မယ်။ ဒါပေမယ့် ညကြီးအချိန်မတော်ကျမှ သွားကိုက်လာလို့ သွားဆရာထံ မသွားနိုင်သေးဘူးဆိုရင် အခု ဖော်ပြပေးမယ့် အိမ်တွင်းဆေးနည်းလေးတွေကို အသုံးပြု ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒါဆို သင် ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာကို သက်သာပျောက်ကင်းစေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ ဆား အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ ဆားရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေကို အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့။ ဆားနဲ့ ပလုတ်ကျင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် သွားကြားထဲမှာ ကပ်ငြိနေတဲ့ စားကြွင်းစားကျန်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီးတော့ သွားနဲ့သွားဖုံးက […]
ကျောက်ကပ်ဝေဒနာရှင်များအတွက် အထူးကောင်းမွန်တဲ့ ဒုဓလီရွက် နဲ့ ဖရဲသီး ဆေးနည်း
ကျောက်ကပ်ဝေဒနာရှင်များအတွက် အထူးကောင်းမွန်တဲ့ ဒုဓလီရွက် နဲ့ ဖရဲသီး ဆေးနည်း ကျောက်ကပ်ရောဂါဆိုတာ ငွေကုန်ကြေးကျလည်းများသလို၊ ခံစားရတဲ့သူတွေအတွက်လည်း အရမ်းကိုပြင်းထန်တဲ့ ဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ရှိသူတွေအနေနဲ့ အရမ်းရောဂါမရင့်ခင်မှာ အထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ကျောက်ကပ်ဝေဒနာရှင်များအတွက် အထူးကောင်းမွန်တဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ အိမ်တွင်းနည်းလမ်းလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်း မရှိတာကြောင့် စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေနော်။ ဖရဲသီးစေ့ – ဖရဲသီးစေ့ဟာ ကျောက်ကပ်ကို အရမ်းအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိပ်အတောက်တွေကို ပြေစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိတဲ့အပြင် ကျောက်ကပ်ထဲကအညစ် အကြေးတွေကိုလည်းသန့်စင်ဖယ်ရှား ပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီး ကျောက်ကပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ နာကျင်မှုဝေဒနာတွေကိုလည်း သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။လိုအပ်သောပစ္စည်းများ – ၁။ဖရဲသီးစေ့(အခြောက်) တစ်ဇွန်း။၂။ရေ (၂) ဖန်ခွက်။ပြုလုပ်နည်းး – ရေနွေးကရားထဲကို ရေ(၂)ဖန်ခွက်ထည့်လိုက်ပါ။ အဲဒီ့အထဲကို ဖရဲသီးစေ့ခပ်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ပါ။ ရေအေးသွားပြီဆိုရင် သောက်သုံးလို့ရပါပြီ။ တစ်နေ့ကို […]
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ လက်တွေ့ပျောက်တဲ့ ဆေးနည်းကောင်း
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ လက်တွေ့ပျောက်တဲ့ ဆေးနည်းကောင်း ကိုယ်တိုင်ဖြစ်မှဘယ်လောက်ခံရခက်တဲ့ရောဂါလဲဆိုတာသိရတယ်။ကိုယ့်လိုရောဂါတူ မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းကိုယ်ခြင်းစာမိတယ်။ဒါ့ကြောင့်ကုသိုလ်ယူတဲ့အနေနဲ့ဆေးနည်းလေးမျှဝေပါတယ်ရှင်။ဆေးနည်းမညွန်းမှီ ရောဂါအခြေနေခန့်မှန်းလို့ရအောင်အရင်ပြောပြမယ်နော်။လွန်ခဲ့တဲ့ ရက် ၂၀ က အသက်ရှုမဝဘူး။၃ရက်မြောက်နေ့ပိုဆိုးလာတယ်။ဒါနဲ့အခြေနေမကောင်းလို့ ဆေးရုံသွားရတော့တယ်။ အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံနဲ့ဖွားအိမ်နဲ့ကလမ်းလျောက်သွားရင် ၅မိနစ်ဘဲ။အမြန်လိုလို့ကားနဲ့သွားတာ ၁၅ မိနစ်ကြာတယ်။ကားပိတ်တာလေ။ကားပေါ်မှာတင် အသက်ရှုကျပ်ပြီး ပြာနမ်းသွားတယ်။ Emergency ရောက်။လိုအပ်တာစစ်ပြီး နှလုံးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးပါမောက္ခဦး—- နဲ့ကုသမှု့ခံယူတယ်။အဖွားက နှလုံးသွေးကြော၂ချောင်းကျဉ်းနေတာ။ နှလုံးခုန်နှုန်းကလဲ ၅၀အောက်သာထိုးကျချင်နေတယ်။ကုသမှု့ ၅ရက်ထိအခြေနေကတိုးတက်မလာဘဲပါးစပ်ဟပြီးလေရှုနေရတယ်။ဆရာဝန်ကြီးကစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေနေမဟုတ်ဘူးတဲ့ လူကအမောဖောက်နေပြီပါးစပ်ဟပြီးရှုတဲ့ရက်ကများလာတော့ ရင်ဘက်တွေပါနာ စကားပြောလဲမော အသက်ရှုလဲမောဘာမှကိုမလုပ်နိုင်တော့တာ။ သေမှာလဲကြောက်တယ်။ဒါနဲ့ အင်တာနက်ထဲဆေးနည်းတွေရှာကြည့်တယ်။နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါလို့ရိုက်ထည့်ပြီးရှာလိုက်တာဆေးနည်းတွေအများကြီးဘဲတွေ့တယ်။ဆေးနည်းအများကြီးထဲကမှ တစ်ခုကိုရွေးလိုက်တယ်။နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါအတွက်ကြွက်နားရွက်မှိုခြောက် လက်တစ်ဆုတ်တရုတ်ဆီးသီးခြောက် ၅လုံး ဂျင်းလက်တဆစ်ဆားအနည်းငယ်ရေဖန်ခွက်နဲ့ ၃ခွက် ၁ ခွက်တင်ကျိုမနက်တစ်ခါသောက်ညနေတစ်ခါထပ်ပြုတ်ပြီးညတခါသောက်ပြုတ်ရည် ၂ခါယူပါတယ်။ အဖတ်ကိုတော့စားနိုင်ရင်စား အဖွားတော့မစားနိုင်လို့အရည်ဘဲသောက်တယ်။၁၅ ရက်သောက်ပေးရပါမယ်။နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါအတွက်ယူပြစ်သလိုသက်သာပျောက်ကင်းစေတာ ကိုယ်တွေ့ပါနော်။ခုမမောတော့ဘူး။အသက်ရှုလဲဝဝလင်လင်ဘဲ။နှလုံးခုန်နှုန်းတောင် ၇၀ကျော်ထိတက်လာတယ်။ပုံမှန်နီးပါးနေလို့ကောင်းပါပြီ။ငွေမကုန် လူမပန်းဘဲ လက်တွေ့သက်သာပျောက်ကင်းတဲ့ဆေးနည်းလေးမို့မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ရောဂါတူမိတ်ဆွေများ သက်သာပျောက်ကင်းကြပါစေ။ဒီဆေးရဲ့ ဆိုကျိုးတခုတော့ ကျမ ကြားဖူးပါတယ် ။ကြာရှည်သောက်မယ်ဆို ….ကျောက်ကပ်ကိုပျက်စီးစေတတ်ပါတယ်တဲ့ …သတိထားသောက်စေခြင်ပါတယ် ။ […]
အမေရိကန် CDC မှ အပ်မှိုခေါ်တဲ့ Enoki မှိုမှာ Listeria ပိုးတစ်မျိုးရှိတဲ့ အတွက်မစားဖို့ ပြောကြား
အမေရိကန် CDC မှ အပ်မှိုခေါ်တဲ့ Enoki မှိုမှာ Listeria ပိုးတစ်မျိုးရှိတဲ့ အတွက်မစားဖို့ ပြောကြား အပ်မှိုခေါ်တဲ့ Enoki မှိုမှာ Listeria ပိုးတစ်မျိုးရှိတဲ့အတွက် မစားဖို့ အမေရိကန် CDC ပြောကြားမင်္ဂလာပါ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မြန်မာတွေက အပ်မှိုဆိုပြီးခေါ်တဲ့ Enoki မှိုမှာ Listeria ပိုးတမျိုး ရှိနေတဲ့အတွက် မစားကြဖို့ အမေရိကန် CDC ကပြောလိုက်ပါတယ်။ အစားမတော် တစ်လုပ်မဖြစ်ဖို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ အသက် ၆၅ နှစ်နဲ့အထက်ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ခံအားစနစ် အားနည်းသူတွေမစားဖို့ သတိပေးထားပါတယ်။လောလောဆယ် Sun Hong Foods, Inc ကုမ္ပဏီတံဆိပ်နဲ့ မှိုတွေကို ပြန်သိမ်းဖို့ ညွှန်ကြားထားတယ်။ ခြားတံဆိပ်တွေကိုတော့ သတိပေးတာမရှိသေးဘူး။ပြန်သိမ်းဖို့ ညွှန်ကြားထားတဲ့ အပ်မှိုကြောင့်၎ ယောက်သေဆုံးပြီးအယောက် […]
ကျောက်တည်သူများ ကျောက်ကြေစေမည့် သဘာဝ ဆေးနည်း
ကျောက်တည်သူများ ကျောက်ကြေစေမည့် သဘာဝ ဆေးနည်း ဆီးအိမ်၊ ဆီးလမ်းကြောင်း၊ ကျောက်ကပ်တို့မှာ ကျောက်တည်နေလျှင် သဘာဝနည်းဖြင့် ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်ကြပါတယ်။ ၁။ အုန်းသီးနုနု တစ်လုံးကို ခူးလိုက်ပါ။ (အောက်ကို ပြုတ်မကျစေရပါ) ၂။ အုန်းသီးထိပ်ပိုင်းလေးကို ဖြတ်ပြီး လှော်ထားသည့် ငရုတ်ကောင်း ၅ စေ့ခန့်ကို အမှုန့်ကြိတ်ပြီး ထည့်စိမ်ထားလိုက်ပါ။ ၃။ တစ်နာရီခန့် စိမ်ထားပြီးလျှင် ၄င်းအုန်းစိမ်းရည်ကို သောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၄။ မနက်အိပ်ယာထခါစမှာ သောက်ရေ မတ်ခွက်အပြည့်ဖြင့် တစ်ခွက် သောက်ပေးပါ။ ဆီးများများ သွားလိုက်လျှင် ကျောက်များကြေ၍ ကျသွားပါလိမ့်မည်။ကိုးကား။ ။ မြန်မာ့ဆေးကျမ်း၊ ရိုးရာဆေးမြီးတိုများ Unicode ကြောကျတညျသူမြား ကြောကျကွစေမေညျ့ သဘာဝ ဆေးနညျး ဆီးအိမျ၊ ဆီးလမျးကွောငျး၊ ကြောကျကပျတို့မှာ ကြောကျတညျနလြှေငျ သဘာဝနညျးဖွငျ့ ပြောကျကငျးအောငျ […]
နှာခေါင်းအမြဲပိတ်ပြီး နှာရည် တောက်လျှောက် ကျနေသူများအတွက် သက်သာစေမဲ့နည်းလမ်း
နှာခေါင်းအမြဲပိတ်ပြီး နှာရည် တောက်လျှောက် ကျနေသူများအတွက် သက်သာစေမဲ့နည်းလမ်း နှာခေါင်းက အမြဲပိတ်ပြီး နှာရည်ကတောက်လျှောက်ကျနေပါတယ်ဆရာ။ နှစ်ခါခွဲဘူးပါတယ်ဆရာ ဆရာဝန်အဆိုကတော့ လေအိတ်ကြီး‌တယ်ပြောပါတယ်ဆရာ။ ထိပ်ကပ်နာလို့လည်းပြောကြပါတယ်။ ဆေးနည်းလေးများသိလိုပါတယ်။ နှာခေါင်းပိတ်၊ ထိပ်ကပ်နာ – ရေရှူပါ ။ မျက်​နှာသစ်​ ပြီးနောက် ရေကိုလက်ခုပ်နဲ့ရှူသွင်းပါ။ နှာခေါင်းပိတ်ရင်ပွင့်တဲ့အပေါက်ကနေ ငယ်ထိပ်ပေါက်အောင်ရှူသွင်းပါ။ အကျင့်ရရင်ရှူသွင်းတတ်လာပါလိမ့်မယ်။ ချင်းတက်ပါးပါးလှီး ရေနွေးမတ်ခွက်တစ်လုံးမှာစိမ်ထားပါ။ ရေနွေးကြမ်းသောက်သလိုတစ်နေကုန်သောက်နေပါ။ မှိုင်းရှူ​ ဆေးရှူပေးပါ။ တိုင်းရင်ဆေးအမှတ် ၄၃။အကင်းဆယ်ပါးဆေးမှုန့်ဝယ် မီးခဲပေါ်ဖြူးရှူပေးပါ။ ထိပ်​ကပ်​နာ (နှပ်ပုတ်စော်နံရင်)အဆင့်ဆိုရင်တော့ မရိုးပင်​​ခေါ် ငဖြူကြီးပင် အရွက်တွေကို အခြောက်လှန်း မီးရှို့ရှူပေးရင်ပျောက်နိုင်တယ်လို့ အာယုဗေဒဆေးကျမ်းများမှာပါပါတယ်။ နှပ်ပုတ်စော်နံရင်.သံပရာသီးစိတ်အရည် နှာခေါင်းမော့ ညှစ်ထည့်ပါ။ အစေ့မပါပါစေနဲ့။တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်ထည့်ပါ။ unicode နှာခေါငျးအမွဲပိတျပွီး နှာရညျ တောကျလြှောကျ ကနြသေူမြားအတှကျ သကျသာစမေဲ့နညျးလမျး နှာခေါငျးက အမွဲပိတျပွီး နှာရညျကတောကျလြှောကျကနြပေါတယျဆရာ။ […]
ဆီးချို တက်နေသူများနှင့် သွေးတိုးသမားများအတွက် သက်သာစေတဲ့ဆေးနည်း
ဆီးချို တက်နေသူများနှင့် သွေးတိုးသမားများအတွက် သက်သာစေတဲ့ဆေးနည်း ဆီးချို တက်နေသူများ ခင်ဗျာ ဒီဆေးနည်းဟာ အရမ်းဆေးစွမ်းထက်ပါတယ်။ ဆေးနည်းကတော့ – ကြက်သွန်ဖြူ (၃) တက်။ကွမ်းရွက် (၂) ရွက်။ ဤ (၂) မျိုးကို အချိုးအစားအလိုက် အတူတကွ နံနက်အိပ်ယာထ တစ်ကြိမ် ည အိပ်ယာမဝင်မှီ တစ်ကြိမ် ဝါးစား၍သော် လည်း ကောင်း အရည်ညှစ်သောက်၍ သော်လည်းကောင်း ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုကြည့်ပါ။ဆီးချိုတက်နေသူများ ဆီးချိုကျသည့်အပြင် သွေးတိုးလည်း ကျစေပါတယ်။ ဆီးချိူရောဂါ – သရက်ရွက်မှာ အစွမ်းထက်ဆေးဘက်ဝင်အာနိသင်များစွာရှိကြောင်းကို သိရှိသူနည်းပါတယ်။ဆီးချိုသမားများအတွက် သရက်ရွက်ကို ရေတစ်ညစိမ်ပြီး မနက်မိုးလင်းတိူင်းသောက်ပေးပါက ဆီးချိူကိုသိသာစွာ ကျစေပါတယ်။ထိုအပြင် ဆီးချိုကြောင့် မျက်စိသွေးကြောပျက်စီးခြင်းကိုလဲ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။သြေးတိုး – သရက်ရွက်က သွေးကြောများကို ကြံခိုင်စေပြီး သွေးကြောထုံးခြင်းရောဂါကိုပါ ကုသပေးနိုငိပါတယ်။ရေနွေးကြမ်းထဲ […]